Iindaba - Isikhumbuzo seminyaka eli-15 seTaizhou Lujury Technology Co., Ltd.
UWu Yunfu, ongusihlalo we Taizhou Lujury Technology Co., Ltd., kunye no Zhang Juqin, umphathi jikelele wenkampani, bahlanganisana kunye nabameli babanikezeli abangaphezulu kwama-30 kwaye babenobuhlobo kunye notshintshiselwano olunzulu.
Ukubizwa kwenkomfa ayithethi nje ukuba iLujury Technology iyakwamkela ixesha elitsha ngenkangeleko entsha, kodwa ikwathetha ukuba iLujuryTechnology izakuthathela ingqalelo enkulu kulawulo lwentengiso kunye nenqanaba lentsebenziswano nabathengisi.
Kwintlanganiso, uSihlalo uWu Yunfu wenza intetho kwaye wenza intetho ephambili. Uvakalise umbulelo wakhe kwinani elikhulu labathengisi ngentsebenziswano yabo enyanisekileyo kunye nenkxaso yexesha elide.
Ngokusekwe kuhlalutyo olunzulu lwemeko yangoku yomzi-mveliso, ucebise iinjongo kunye nemibono kuphuhliso lobuchule bexesha elizayo, ukhuthaze ukucinga okutsha ukusombulula iingxaki, kwaye azame ukufikelela kwinqanaba eliphezulu lomzi mveliso. Kwangelo xesha, ibeka ulindelo kunye neemfuno zonxibelelwano nentsebenziswano.
Okokuqala, thetha unxibelelwano olulula nolungqalileyo, sukucinga izinto ezinzima kakhulu;
Okwesibini, ingqibelelo, xa kufikwa ekwenzeni, ungayilibali intliziyo yokuqala, njengesiqhelo;
Okwesithathu, amaqabane amaqabane anokufikelela kwimfezeko kwicandelo labo loshishino;
Okwesine, indlela yokuziphatha, ukusebenzisana ngokunyanisekileyo, ukufuna indawo esivumelana ngayo ngelixa sigcina iyantlukwano, kwaye kwangoko ukubeka phambili iingxaki, kulula ukuzisombulula kwangexesha.
UZhang Juqin, umphathi jikelele we-LujuryTechnology, uthe kwintetho yakhe unombulelo ongazenzisiyo kubaboneleli ngegalelo labo kunye neenzame zabo kumgangatho weemveliso zenkampani. Iimveliso zenkampani azinakwahlulwa zivela kubathengisi, kwaye icandelo ngalinye sisiqinisekiso somgangatho wemveliso.
UNksk. Zhang ugxininise ukuba kwixa elizayo, iyakuqinisa ukuphathwa kwempahla, kwaye ibonelele ngeendlela ezahlukeneyo zolawulo kubaboneleli. La macala mabini azakusebenzisana nzulu ukukhuthaza ukusebenza ngokukuko kwamaqela omabini, ukunciphisa iindleko zokusebenza kunye nokwenza ishishini elikhulu. ixabiso. Ukholelwa ngokuqinileyo ukuba njengoko inkampani iqhubeka nokukhula, intsebenziswano phakathi kwala macala mabini izakusondela kwaye ngokudibeneyo ukuvuna iziqhamo zempumelelo.
Kweli xesha litsha, iTaizhou Lujury Technology Co, Ltd Umbutho uza kuphendula ngokubonakalayo kumgaqo-nkqubo wesizwe kwaye uhambisane namaxesha okufaka igalelo kuphuhliso lweshishini lezithuthi zombane elitsha laseTshayina, lisebenzisa umoya wesikrufu kunye nokuqonda umgangatho.